Home Somali News Kenya: 141 arday oo ka mid ah ardayda Jaamacadda Nairobi oo ku...
Cabsida Bulshada Kenya Ka Qabto Al-shabaab Oo Sababtay In Shoodh Koronto Oo Jaamacadda Nairobi Ka Dhacay Sababay Dhaawaca 141 Arday
Ugu yaraan hal arday ayaa geeriyooday, 141 arday oo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaadhay, kaddib markii ay maqleen qarax gudaha Jaamacadda Nairobi oo ay dhiganayeen ka dhacay, taasoo keentay inay qaarkood iska soo tuuraan dhismaha jaamacadda gelinkii hore ee Axadda.
Ardayda qaarkood ayaa ku dhawaaqayey markii ay ka boodayeen dhismaha jaamacadda erayo ka mid yihiin Al-shabaab ayaa jaamacadda soo weerartay, taasoo welwelkii ardaydu qabteen sii kordhiyay, sababtayna inay ka boodaan dabaqyada shanaad iyo lixaad ee dhismaha jaamacadda.
Qaraxa ardayda Jaamacadda Nairobi maqleen ayaa la sheegay inuu ahaa mid ka dhashay korontada ama xadhkaha laydhka, balse ardaydu u qaateen in weerar lagu soo qaaday jaamacadda, arrintaasoo muujinaysa heerka argagaxa ah ee reer Kenya ka qabaan cabsi ah weeraro uga yimaad Al-shabaab.
Dhaawacyada ardayda ayaa la kala geeyey cusbitaallada Kenyatta iyo Kikuyu ee magaalada Nairobi si loo daweeyo, iyadoo la arkay arday badan oo ay ku yaallaan dhaawacyo fudud oo laga daweeyey.
Ku-xigeenka guddoomiyaha Jaamacadda, Peter Mbithi ayaa warbaahinta u sheegay in wiil ardayda ka mid ahaa oo 30-jir ah uu u geeriyooday dhaawac soo gaadhay, kaddib markii la geeyay dhaawiciisa cusbitaalka.
“Ardayga geeriyooday wuxuu iska soo tuuray dabaqa shanaad ee dhismaha Jaamacadda, dhaawac culus ayaana gaadhay,” ayuu markale yidhi Mibthi oo ku daray hadalkiisa inay jiraan arday ka booday dabaqa lixaad ee dhismaha.
Sidoo kale, warbaahinta Kenya ayaa warinaysa inay jiraan arday dhaawacyo culus gaadheen, kuwaasoo lagu daweynayo cusbitaallada Nairobi oo dhaawacyadooda lagula tacaalacyo.
Cabsida ardayda ee keentay dhimashada iyo dhaawaca ayaa timi kaddib markii Al-shabaab ay weerar ku qaadday toddobaadkii la soo dhaafnay Jaamacadda Gaarisa, halkaasoo ay ku dileen 148-qof oo arday u badan.
Raysalwasaare Kheyre iyo wefdigiisi oo Adis Ababa lagu soo dhaweeyey